people Nepal » के चाहन्छ विराटनगर ? : साखको आवरण मात्र बाँकी रहेको ‘खोक्रो’ सहर के चाहन्छ विराटनगर ? : साखको आवरण मात्र बाँकी रहेको ‘खोक्रो’ सहर – people Nepal
विराटनगर – दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा मुलुककै कान्छो महानगर विराटनगरले छान्ने जनप्रतिनिधिसँग चुनौतीका चाङ छन् । युवा उम्मेदवारहरू मैदानमा उत्रिएको यो ऐतिहासिक सहरका जनप्रतिनिधिले आगामी पाँच वर्षमा साखको आवरण मात्र बाँकी रहेको ‘खोक्रो’ सहरलाई साँच्चैको महानगरमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।